I-GAZ-2752 emakethe yemoto yasendlini iyaziwa ngegama elithi "Sable". Umshini uthathwa njengokwethenjelwa nokusebenzayo. Futhi iqiniso lokuthi imoto yadalwa ngabakhiqizi basekhaya bajabulisa kakhulu. Kanye nokungahloniphi ukusebenza, umshini uhlukaniswa nokugcinwa okungabizi ngezindleko. Izingxenye zekhwalithi zinikeza isikhathi eside sokusebenza, ngakho-ke isikhathi phakathi kokulungiswa kwanda, okuyimpikiswano ebalulekile lapho ukhetha imoto ethembekile.
Itholakala emotweni yeGAZ ethi "Sable" izici zobuchwepheshe ezingu-2752, ukusetshenziswa kwephethiloli kwenza imoto idume kakhulu ezentengiselwano eziphakathi nezincane. Lo mshini ubonakala ngokuhamba kahle nokuhamba kahle kwezokuphatha, kanti futhi kunomuthi ophansi kakhulu wokusetshenziswa kwamandla kagesi. Umshini usetshenziselwa ukuletha izimpahla kumabanga ahlukene.
Lo mshini unemikhumbi ekhethekile yemithwalo yempahla, umthamo wayo ufinyelela ku-7 m³. Iminyango engemuva yomzimba ivulekile ngokuphelele, okwenza kube lula ukulayisha / ukulayishwa esiqwini, futhi ngasemnyango wecala ungakwazi ukulayisha izinto ezincane emotweni.
I-GAZ-2752 ikhiqizwa emazingeni ahlukahlukene okuhlukanisa. Ngakho-ke, imoto "iSable-Business" ibhekisela kwisizukulwane sokugcina sezimoto zokuthengisa kuze kube yimanje, okhiqizwa ngo-2010. Abathuthukisi balesi simodeli benza umzamo wokugwema izinsalela eziningi, okuyisici semishini yangaphambilini. Kwamanje GAZ-2752 isetshenziselwa imininingwane evela kubakhiqizi basekhaya nabangaphandle, njengeqembu, "Bosch" nezinye izinto. Ukusetshenziswa kwezingxenye zama-automaker avunyelwe ukuthuthukisa izici zobuchwepheshe ze-GAZ-2752 "iSable", isibonelo, ukwandisa ukuthembeka komshini.
Ngenguqulo yakamuva yemoto, isikhala sangaphakathi sakhula futhi i-ergonomics yomshini ithuthukisiwe, eyayibuye ifakwe ohlelweni lwe-ABS ne-GUR. "Sable" ikhiqizwa ngezihumusho ezahlukene: ukusebenza ngegesi, i-petroli noma idizili.
Izici zobuchwepheshe be-GAZ-2752 "I-Sable" iyahlukahluka kuye ngokuthi ukusebenza komshini, isibonelo, amandla okuthwala umthwalo. Imodeli yezimpahla kanye nomgibeli yi-0.3 amathani, ngokuba i-cargo van kusuka ku-0.77 kuya ku-0.9 amathani, kanti isisindo sonke semoto sibe ngamathani ayizigidi ezingu-2.8. Lokhu, ngendlela, kungathiwa yizinzuzo, ngoba lokhu kuqinisekisa ukuhamba Ukuthutha okubizwa ngokuthi ezindaweni ezihlala emadolobheni amakhulu, lapho kutholakala khona amaloli asindayo.
Ekwahluleleni izimpendulo zabashayeli, izici zobuchwepheshe ze-GAZ-2752 Sobol kanye nobukhulu bayo buvumela ukuba ziqondise futhi zipake emgwaqeni omncane noma ezindaweni ezivaliwe. Ubukhulu obuningi bemoto bunjengoba:
Ubude 4.81 m;
Ukuphakama - 2,2 m;
Ububanzi - 2.075 m.
I-wheelbase yemoto ingu-2.76 m, ithrekhi yemoto ingu-1.7m kuphela. Ukuphakama okuncane kokulayishwa kwe-0.72 m kuvumela, ngokusho kombiko wabanikazi, ukusebenzela ukulayishwa nokulayishwa ngaphandle kwezindleko ezikhethekile.
"I-Sable" ine-wheel wheel ezine. Umshini ulungele ukuhamba ngomgwaqo futhi ungathuthukisa isivinini cishe ngamakhilomitha ayikhulu namashumi amabili ngehora.
Ukusetshenziswa kwefuthe ngemoto
Ukusetshenziswa kwephethiloli yemoto kuncike kokucushwa:
Uma usebenzisa i-diesel fuel - 9.8 amalitha per 100 km;
Izinjini ze-petroli ezinezinga lokugeleza cishe amalitha ayi-10 ngamakhilomitha ayikhulu;
Uma usebenzisa amakhemikhali amafutha, ukusetshenziswa kuzoba yi-12 amalitha kagesi ngamakhilomitha ayikhulu.
Izici zobuchwepheshe be-GAZ-2752 "I-Sable" vumela ukusebenzisa amamandla kagesi amamodeli ahlukahlukene kanye nabakhiqizi. Amamodeli athandwa kakhulu kule moto ezweni lethu anesimodeli esine-cylinder fuel unit UMZ-40524 enekhono lama-2800 cm³ kanye nomthamo okhulayo ofika ku-96 kW. Ukuhlukahluka kunokwenzeka nge injini ye-petroli engaphandle ye-petrol yangaphandle ye-Chrisler-2.4L. Lezi zinjini zomlilo zangaphakathi zisebenzisa i-AI-95 uphethiloli.
Ezinye izinhlobo ze-Sobol zinezinjini ze-diesel ze-Cummins, ezinomthombo wesigamu sezigidi zamakhilomitha. Kunezinto ezihlukahlukene zomshini, okusebenzisa igesi njengophethiloli.
I-Cabin GAZ "Sable" 2752, idivaysi, izici zobuchwepheshe esizicabangelayo, zingaba nabantu abathathu (abagibeli ababili nomshayeli). Lokhu kungenye yezinzuzo zomshini.
Iklabhu yomshayeli iklanyelwe ngezidingo ze-ergonomic engqondweni. Inguqulo ehlanganisiwe yemoto ifakwe ikakishi eliyisihlalo esingu-7 kanye nendawo encane yokuhambisa imithwalo. Kukhona ukuguqulwa okusetshenziselwa ukuthutha imithwalo noma imishini, kanye nokubhekela abasebenzi bezisebenzi.
Ukubuyekezwa kwabanikazi bemoto
Ukufingqa yonke imininingwane etholakele nge-GAZ Sobol 2752 (ukuchazwa, ukubuyekezwa kanye neminye imininingwane ethinta ukuhlolwa kwezimoto), kungathiwa ihambisana nezicelo ezihlukahlukene kakhulu, kusukela ekuthuthweni kwezilwane, abagibeli, ukuya emaphandleni nokuphela kokuthuthwa kwemishini yasendlini noma Izinto zokwakha. Umshini, uma ususelwe ezinhlokweni eziningi ezinhle, waba yinto yonke futhi iyadingeka emakethe yemoto yezwe.
Kusukela ekuhlaziyweni kweziphakamiso zokudayiswa kwezimoto kungaphetha ngokuthi intengo ejwayelekile yemoto iqala kusukela ku-0.65 million ruble. Amashini ayesebenza ayenesidingo esikhulu, futhi izindleko zemishini zihluka kusuka kuma-ruble angu-150 kuya ku-600.
Upende Alkyd lokuzivikela evele ezahlukene
Ungaphendula kanjani futhi nini kiss usuku uphawu
Promotion - kuyini? ukushukuma ukukhuthazwa
"Tutti Frutti": dessert ezimangalisayo
Yini okufanele ibe ipayipi engayitholi
The movie ezicindezelayo kakhulu: Isilinganiso inhloso
Umbhede for iziguli ngisembhedeni